Baarlamanka Puntland oo Maanta ka hadlay arimo ku saabsan qulqulka Tahriibta – SBC
Baarlamanka Puntland oo Maanta ka hadlay arimo ku saabsan qulqulka Tahriibta
Baarlamanka Dowlada Puntland ayaa maanta kulan ka mid ahaa kalfadhiga 30naad oo ay isugu yimaadeen guriga ay ku shiraan ee magaalada garoowe waxa ay kaga hadleen arimaha Tahriibta iyo dhibaatooyinka qul qulka dadka Soomaaliyee d.
Waxaa kulankan la isku weydaarsaday doodo iyo figrado muhiim ah oo ay xildhibaanadu soo bandhigayeen si xal loogu helo qulqulka dadka u badan dhalinyarada ee dalka qaab naf halig nimo ah ugaga baxaya .
Waxa ay soo hadal qaadeen xildhibanadu talaabooyinka Muhiimka ah ee ay haboontahay in laga qaado dhinacyada fududeeya tahriibka dhalinyarada sida goobaha laga raro dadka oo la xiro, kordhinta ciqaabta dadka lagu qabto falalkaas, iyo adkeynta xeebaha Puntland ee laga baxo.
Kulankan ayaa ahaa mid muhiim ah xildhibaanaduna siweyn u muujinayeen in ay muhiimadiisa taasina waxa ay keentay in dib loo dhigo la isuguna yimaado kulamo kale oo ajandahan ku aadan.
Sikastaba ha ahaatee Puntland waxa ay ka mid tahay goobaha ugu weyn ee ay saameynta ku yeelatay qulqulka tahriibta, waxaana marar badan soo baxay dad u badan dhalinyaro oo dhanka badda iyo berigaba uga baxay .